05 Jun, 2020 - 00:06	 2020-06-05T00:49:24+00:00 2020-06-05T00:03:31+00:00 0 Views
NDODAWO musikana wekuroora ane makore 22 – 26. Ini ndinoshanda muHarare. Nhare yangu 0719 067 123.
Makadii? Ini ndiri murume ane makore 35 nemwana 1, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi anoda zvemba uye asina chirwere. Nhare yangu 0777 931 954.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 37, ndotsvaga mukadzi asiri pamushonga ari serious anoshandawo. Nhare yangu 0786 325 717.
Ndiri murume ane makore 60, ndakafirwa saka ndoda akafirwawo ane makore 45 zvichikwira ane mari yake. Ini ndiri paPension. Nhare yangu 0773 470 619.
Makadii? Ndiri murume ane makore 33, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 20 kusvika 31. Ndinoshanda ndibatei pa0718 854 678.
Ini ndiri murume ane makore 37, ndinotsvagawo mudzimai ane mwana mumwe kana asina aine makore 25 zvichidzika. Zvakawanda totaura, andida anondibata pa0771 489 612.
Ndiri murume ane makore 44, ndotsvagavo mukadzi asati aita imba uye asina mwana. Ngaave anondinzwisisa zvakanaka, wandichapikira kuve naye zvoupenyu hwese. Fonai pa0773 222 832.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 24, ndinotsvagawo mukomana ane makore 26 kusvika 29. Ndiri HIV negative uye ndodawo ari negative. Ndatenda hangu, nhare yangu 0788 169 860.
Makadiko veKwayedza? Vanhu ngavachirega kufona panhamba idzi 0717 901 024. Ndakawana wandaida makaita basa.
Ndiri mukomana ari kutsvagawo musikana akanaka ane makore 24 kusvika 28. Kana pane anoda nezvangu nhamba idzo 0734 964 357.
Makadiiko pachirongwa? Makaita basa, ndakamuwana wandaida. Vaifona pa0783 017 437 chiregai.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 27, ndinoshanda uye ndodawo musikana ane makore 18 kusvika 23 asati amboroorwa asiri pamushonga. Zvakawanda tinotaura pa0716 683 410.
Ini ndiri murume ane makore 42 nevana 3, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane mwana 1 aine makore 38 zvichidzika asiri pamushonga. Nhare yangu kune andidawo 0774 683 735.
Kazuwai veKwayedza? Ndiri kutsvagawo murume anoda kuroora ari pachokwadi. Ndiri mukadzi ane makore 28 uye ndine vana 2. Nhare yangu 0783 329 355.
Makadii? Ndiri murume ane makore 38, ndotsvaka mukadzi wekuroora ave kuda zvemba kwete zvekutamba. Ndiri HIV positive, vandifarira vanofona pa0733 211 558.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 46, ndinoda murume anoda zvemba ari pamushonga. Ndine vana 3, andifarira ngaandibate pa0777 989 201.
Ndinotsvagawo mukadzi ari pachokwadi nekuroorwa ane vana 2 kana 3 uye ane makore 30 kusvika 45 asiri pamushonga. Ndoita basa remaoko, nhare yangu 0773 313 849.
Makadii veKwayedza? Ndinotsvagawo murume wekushamwaridzana naye. Ndiri mudzimai ane makore 34 uye ndoda anotya Mwari. Nhare yangu 0777 734 151.
Ndiri murume ane makore 38, ndinotsvakawo mukadzi anoda zvemba kwete vanoda zvekutamba. Nhare yangu 0774 191 656.
Ndiri murume ane makore 32, handina mwana uye handisi pamushonga. Ndinodawo mukadzi ari pachokwadi ava kuda zvemba ane makore 30 zvichidzika. Nhare yangu 0786 642 949.
Kwayedza makadiiko? Ndiri mukomana ane makore 27, ndinodawo musikana akanaka kwete anofungidzira kuti akanaka. Anoenda kubasa ngaandibate pa0778 651 571.
Makasimba here? Ini ndiri murume ari kutsvagawo mukadzi akanaka wekushamwaridzana naye. Andifarira nhamba dzangu 0774 630 047.
Makadini veKwayedza? Ndinotsvagawo mukadzi wekuroora, ndine makore 36 uye ndodawo ari positive. Matsotsi kwete. Nhare yangu 0778 322 457.
Makadini vabiki nevapakuri veKwayedza? Ndingafara kwazvo mukaisawo shambadzo yangu mubepanhau renyu. Ndiri murume ane makore 27, ndodawo mudzimai ane makore 26 kusvika 18. Ngaave ari pachokwadi anoda zvemba uye ari maMutare. Andifarira ngaandibate pa0712 785 833. Vakadzi vevanhu nevanoda kutamba kwete.
Ndiri mudzimai ane makore 47. Ndine mwana musikana 1 akura. Ndinoshanda muHurumende uye ndinotsvakawo shamwarirume ine makore 48 aavimbika asina mudzimai. Ndinobatika pa0717 538 409. Zvizhinji tozokurukura.
Makadii vechirongwa? Ndiri mukadzi ane makore 31 nevana vaviri uye ndiri kutsvakawo murume ari kuda kuroora kwete kuchaya mapoto. Handisi pamushonga, ndinoda ari muHarare. Adawo ndibatei pa0719 105 955.
Makadii veKwayedza? Ndiri muimbi, ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 23. Ini ndine makore 32 uye ndiri HIV negative. Nhare yangu 0787 445 903.
Makadini? Ndiri mudzimai ane makore 46 uye ndiri pamushonga. Ndinotsvakawo shamwarirume ine makore 50 zvichikwira. Vanoda kutamba musafona, nhare yangu 0712 675 480.
Ndinotsvagawo mudzimai ane makore 35 – 45. Ini ndine makore 47, handishande uye ndinoda asinganetse ane rudo. Ndatenda, nhare yangu 0782 284 184.
Makadini veKwayedza? Ndanzwa nekunyora shambadzo yangu, ndiri mukomana ane makore 26 uye ndotsvaga musikana akasimba asina chirwere ane makore 20 zvichikwira. Ini handishande asi pakupa munhu rudo ndozvitemba kuti ndogona. Kana pane andifarira ndibate pa0776 242 073.
Ndiri murume ane makore 37, ndotsvaga mukadzi ane makore 25 kusvika 35. Ndinoshanda, sms ndopindura asi matsotsi handidi. Zvakawanda totaura ndobatika pa0775 618 795.
Makadii veTishamwaridzane? Ini ndiri mudzimai ane makore 35 ekuberekwa uye ndiriwo pamushonga. Ndinotsvaga shamwari yechirume iri serious nekuda kumisa imba. Ndakambonyora imwe tsamba asi ndakasangana nematsotsi, ndakapedzisira ndave kufonerwa nemadzimai acho. Nhare yangu 0774 143 719.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 43 ekuberekwa nevana 4, ndinodawo mukadzi ane tsika nehunhu akavimbika. Ngaave ane vana 2 kana 1, ane makore 30 – 35 uye ari pachokwadi anoda zvekuvaka imba kwete matsotsi. Ndibatei pa0714 228 078.
Kandaiwo ino pamhepo. Ndiri murume ane makore 37 nemwana 1, ndorarama ndisinawo utachiona uye ndodawo mudzimai anogona hupenyu hwekumusha. Ngaave nemakore 19 – 25, ane mwana 1 kana asina, Ini ndine 1, anoda ngaafone pa+27 624 737 924 asi ndokunge une zvandadonongodzawo pamusoro.
Makadini? Ndanyorera ndanyorerazve ndishambadzeiwo, ndiri murume ane makore 47 nevanasikana vaviri vakura.Ndogara muHarare uye ndotsvagawo mudzimai wewanano. Ada ndibate pa0785 368 815 totaurina zvizhinji.
Makadii? Ndiri murume ane makore 27 ekuberekwa, ndinotsvagawo musikana wekuwanana naye ari pachokwadi anofarira kunamata. Andifarira ndinowanika pa0773 199 075.
Ndinotsvaga mukadzi ari negative uye anoshanda. Ndine makore 3 uye ndinogara kwaMurehwa. Nhamba dzangu 0782 945 116.
Makadii veTishamwaridze? Ndakawana saka vamwe ngavachirega kufona pa0784 255 156.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 45 okuberekwa uye ndinotsvagawo murume anoda nezvangu ari positive. Ngaave anoshanda ane vana 2 anopinda church yeZaoga or AFM. Ini handina mwana asi ndozvishandira, ndiri positive. Zvakawanda totaura pa0719 575 705.
Ndiri murume ane makore 35, ndinotsvagawo mudzimai ari pachokwadi newanano ane makore 25 zvichikwira asiri pamushonga. Ndinobatika pa0785 922 028.
Ndiri mukadzi ane makore 40, HIV positive uye ndiri kuda murume wekuwadzana naye ane makore 45 – 50 ane rudo. Ngaave ari pachokwadi ari positive seni, vanotamba kwete. Ndinoda anogona kutsvaga mari. Nhare yangu 0715 251 521 asi varume vevanhu kwete.
Makadii zvenyu? Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvagawo musikana akanaka ane makore 18 – 20 anogara muHarare. Andifarirawo anondibata pa0713 833 865.
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 33 ndotsvagawo shamwari dziri pamushonga (penpals) dzekukurukura nadzo. Vanoda tumirai sms pa0736 390 004.
Makadii henyu? Ndiri mukomana ane makore 25 ndotsvaga musikana wekutanga naye imba, ngave aine makore 18-23. Ada nezvangu nhamba dzangu 0732 754 583.
Makadini veKwayedza. Ndotsvagawo mukadzi ane makore 29 kusvika 33. Ndine vana 2, iye ngave ane wakewo. Andida ngaandibate pa0777 467 677, matext ndopindura.
Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 48, HIV negative uye ndinotsvakawo mukadzi mutsvuku ane vana vakevo 2 kana 3. Ngaave ane makore 30 kusvika 40, ndinozvishandira.
Andida ngaandifonere kana kutumira sms pa0714 325 713.
Makadii weTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 22, ndotsvagawo musikana ane makore 18 – 20. Andida ndibate pa0785 583 560, zvizhinji totaura.
Makadii? Ndiri mudzimai ane makore 24 nemwana 1.
Ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 30 zvichikwira asiri pamishonga ane mwana 1 kana 2. Ngaave anoziva Mwari uye asingazeze kupa rudo. Anoshanda anondibata pa0775 376 546.
Ndiri murume ane makore 59 nevana 3 vakura, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 40 – 55 akanaka uye ari pamushonga. Ngaave ane rudo asina murume, nhare yangu 0713 775 816.